Safiirka UK ee Soomaaliya oo gaaray Hargeysa iyo kulamo uu la yeeshay Muuse Biixi – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wefdi uu hoggaaminayo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Fender oo gaaray Hargeysa.
Danjire Ben Fender iyo madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxaa la sheegay inay ka wada hadleen arimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka Somaliland iyo Ingiriiska, ammaanka guud ee deegaanada Somaliland, doorashooyinka, mashaariicda horumarineed iyo wada-hadallada Soomaaliya iyo Somaliland.
Muuse Biixi ayaa dowladda Ingiriiska uga mahadceliyey taageero uu sheegay in ay la barbar taagantahay Somaliland, isagoo sheegay ina Somaliland ay ka go’an tahay adkaynta xiriirka ay la leeyihiin UK iyo guud ahaan beesha caalamka.
Sidoo kale waxa uu sheegay Madaxweyne Muuse Biixi in wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay ka xukuumad ahaan ka taagan yihiin mawqifkii iyo shuruudihii ay beesha caalamka Somaliland hore ugu bayaamisay.
Ugu dambayntii waxa ay madaxweynaha iyo madaxa hay’adda dalka Ingiriiska u qaabilsan kaalmooyinka caalamiga ah ee DFID, Damon Bristow kala saxiixdeen wejiga labaad ee kaalmada dalka Ingiriisku kaga qayb-qaadanayaan sanduuqa hormarinta Somaliland ee lagu maal-geliyo mashaariicda horumarineed ee laga fuliyo.
Kheyre iyo Lafta-gareen oo kormeeray ciidamo la tababarayo